Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, March 19, 2011 Saturday, March 19, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီအပတ်အတွက် အစားအသောက်ကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ ဟင်းလျာက ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပဲ အလွယ်တကူ ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ ငါးလိမ္မော်ပေါင်းနဲ့ ၀က်သားသီဟိုဠ်စေ့ကြော် ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးလိမ္မော်ပေါင်းဖို့အတွက် ငါးအနေတော် တစ်ကောင်လုံးကို ကြေးခွံထိုး၊ ဗိုက်ဖောက်၊ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ဓါးနဲ့မွန်းကာ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အရသာမှုန့်တို့ဖြင့် နယ်ပြီး ခေတ္တထားပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံးခန့်၊ နံနံအနည်းငယ် တို့ကို တောက်တောက်စင်းထားပါတယ်..
ထို့နောက် ၄င်းတို့ကို ပန်းကန်တစ်လုံးတွင်ထည့်ကာ ငရုပ်သီးဆော့၊ ဆား၊ ငံပြည်ရည် နှမ်းဆီအနည်းငယ်၊ အသားမှုန့်တို့ဖြင့် ရောမွှေထားပါတယ်။ ငံပြာရည်ကို ခပ်များများ ထည့်ပါတယ်.. သို့မှသာ ငါးထဲကို အရသာများ ၀င်မှာမို့ပါ။
ငါးကို ပေါင်းမဲ့ ပန်းကန်ပြားထဲထည့်ကာ ရောမွှေထားသော ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်များကို ငါးပေါ် လောင်းချ လိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအနေအထားအတိုင်း ပေါင်းရင်လဲဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်မက နည်းနည်းလေး ထပ်ကွန့်ဖို့အတွက် အခွံနွာကာ ပါးပါးလှီးထားသော လိမ္မော်သီး အချပ်ကလေးများဖြင့် ငါးပေါ် ပုံပါအတိုင်း လှလှပပ ပြင်ဆင်ပါတယ်။
ရေထည့်ထားတဲ့ အိုးတစ်လုံးနဲ့ ပေါင်းဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ ၁၅မိနစ် မိနစ် ၂၀ခန့်ပေါင်းပြီးရင် ငါးအသားတွေ နူးလာပြီမို့ ချလို့ရပါပြီ။
အပေါ်က နံနံပင်လေးအလှဆင်ပြီး ငရုပ်ကောင်းမှုန့်လေး ဖြူးပြီးရင် လှလှပပလေး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ငါးလိမ္မော်ပေါင်းကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အရသာလဲရှိ အမြင်အားဖြင့်လဲ လှတာမို့ ဧည့်သည်လာရင်လဲ အထူးအဆန်းလေးအဖြစ် ဧည့်ခံဖို့ကောင်းတဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဟင်းတစ်မယ် ရနိုင်ပါပြီရှင်။
၀က်သားသီဟိုဠ်စေ့ကြော်ဖို့အတွက် ၀က်သား မိမိနှစ်သက်သလောက်ကို အနေတော်အတုံးလေးများ တုံးပြီး ဆား၊ အရက်အနည်းငယ်၊ အရသာမှုန့်တို့ဖြင့် နယ်ထားပါတယ်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, March 17, 2011 Thursday, March 17, 2011 Labels: ဖားကန့်မှော်နယ်မြေအကြောင်းများ , အက်ဆေး
ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်တွင် အလွန်သာယာ စိမ်းလဲ့ကြည်လင်စွာ စီးဆင်းနေသော ချောင်းကလေးတစ်ခု ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မမွေးဖွားရာ ဇာတိရှိ ကျွန်မတို့အိမ်သည် ချောင်းကမ်းဘေးတွင် မှေးတင် ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်တစ်အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်များသည် လမ်းမကို မျက်နှာမူကာ ဆောက်လုပ်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုချောင်းကလေးသည် ကျွန်မတို့၏ အိမ်နောက်ဖက်တွင် ရှိနေပါသည်။ အိမ်နောက်ဖက် ပြူတင်းပေါက်မှ မျှော်ကြည့်လိုက်မည် ဆိုပါလျှင် ချောင်းထဲမှ မြင်ကွင်းစုံကို မြင်နေရပြီး သွဲ့သွဲ့ညင်ညင် စီးဆင်းနေသော ချောင်းရေစီးသံ ကြားနေရလောက်အောင် နီးကပ်စွာရှိနေခဲ့ပါသည်။ ချောင်းကလေးသည် ကြည်လင်စိမ်းလဲ့စွာ၊ သာယာလှပ၊ တည်ငြိမ်အေးမြစွာ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း စီးဆင်းနေခဲ့ပါသည်။
မနက်ခင်း အိပ်ရာထချိန်တွင် တောင်တန်းများကို ကျော်ဖြတ်၍ ရောက်ရှိလာသော နေရောင်ခြည်သည် စိမ်းလဲ့ကြည်နေသော ချောင်းရေပြင်ပေါ်သို့ ဖြာအကျတွင် လျှပ်တိုက်ပြေးလွှား ဆော့ကစားနေသော လေပြေ လေညင်းကြောင့် ချောင်းရေပြင်ပေါ် ယှက်ဖြာနေသော ဘော်ငွေရောင် လှိုင်းကြက်ခွပ် ကလေးများသည် တလက်လက်ဖြာကာ ငွေမှုန်လေးများ ကြဲပက်လိုက်သကဲ့သို့ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး ၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုပင် လင်းလဲ့ ၀င်းဖြာ နေသည့် မြင်ကွင်းသည် ကြည်နူးစရာ၊ ရွှင်လန်းစရာအတိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ စီးဆင်းနေသော ချောင်းရေသည် အောက်ခံ ကျောက်တုံးကျောက်သားများကိုပင် မြင်ရလောက်အောင် ကြည်လင်စိမ်းမြလို့ နေခဲ့သည်။ ချောင်းထဲတွင် ပေါများလှသော ငါးမျိုးစုံတို့သည်လည်း အုပ်စုဖွဲ့ကာ အေးချမ်းသာယာစွာ ကူးခတ် နေသည်ကိုပင်လျှင် အတိုင်းသား မြင်ရလောက်အောင် ချောင်းရေသည် ကြည်လင် သန့်စင်လွန်းလှသည်။
ဆောင်းအခါတွင်တော့ မြူနှင်းများအောက်တွင် ကြည်လင်နေသော ရေပြင်စိမ်းစိမ်းပေါ်မှာ ဖြူလွလွ အငွေ့များ တလူလူထွက်စေလျှက် နွေးထွေးစွာ စီးဆင်းနေတတ်ခဲ့သည်။ ပြင်ပ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံး နှင်းငွေ့မှုန်များဖြင့် အေးစက်နေသော်လည်း ချောင်းရေမှာထူးထူးခြားခြား နွေးထွေးနေလေ့ ရှိပါသည်။ ချောင်းကမ်းစပ်များတွင်တော့ နှင်းရည်စိုလူးနေသော စိမ်းလဲ့လဲ့ မြက်ခင်းများနှင့် စိမ်းညို့ညို့ စိုက်ခင်းတို့က ချောင်းကလေး၏အလှကို သဘာဝဆန်ဆန် ကျက်သရေရှိစေခဲ့သည်။ ညအချိန်တွင် ရွှေရောင်လင်းဖြာကျနေသော လရောင်အောက်တွင် တည်ငြိမ်စွာ စီးဆင်းနေသော ချောင်းရေနှင့် ဂီတသံပမာ ညင်ညင်သာသာ ထွက်ပေါ်နေသော ရေစီးသံသည် လရောင်ဆမ်းသော ညချမ်းများကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေခဲ့ဖူးပါသည်။
ချောင်းရေသည် နက်သည့်နေရာတွင် ၀ါးတစ်ပြန်ကျော်အထိ နက်ပြီး ကျွန်မတို့ ရေငုပ်ပြီး ချောင်းအောက်ခြေက မြေကြီးကို ဆုပ်ပြီး ပြန်တက်လာကြေး ကစားကြလျှင်ပင် ချောင်းအောက်ခြေကို ရောက်အောင် ငုပ်နိုင်သူ ရှားသည်အထိ ချောင်းရေက နက်ရှိုင်းပါသည်။ လူအများရေချိုးကြသော ရေချိုးဆိပ်များတွင်တော့ အလွန်ဆုံး ရင်ဘတ်လောက်ထိသာ အနက်ရှိပြီး ချောင်း အောက်ခြေသည်လည်း နှုံးများ၊ ရွံ့များကင်းစင်စွာ ချောမွတ်သော ကျောက်တုံးငယ်များ ပြည့်နေသည့် ကြမ်းပြင်သာ ဖြစ်လေသည်။ မိုးရာသီတွင် တောင်ကျချောင်းရေများ၊ မိုးရေများကြောင့် ထိုအချိန်တွင် စီးဆင်းနေသော ချောင်းရေမှာ နောက်ကျိကာ ရွံ့နွံများ ပါနေတတ်သော်လည်း ကျန်သည့်အချိန်များတွင်တော့ အိမ်နောက်ဖေးက ချောင်းကလေးသည် ကျောက်တုံးများနှင့် ငြိမ့်ညောင်းသာယာစွာ စီးဆင်းတတ်ပြီး ရေသန့်စင်မှုမှာလည်း စိတ်ချရလောက်အောင် ကြည်လင်သန့်စင်သော ချောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်က ကျွန်မတို့ဒေသတွင် ရေတွင်း၊ အ၀ီစိတွင်းဟူ၍ မရှိသလောက် ရှားပါသည်။ ချောင်းရေသည် ကျွန်မတို့ ဒေသတစ်ခုလုံး၏ သောက်ရေ သုံးရေအဖြစ် အားကိုးအားထားရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေသတစ်ခုလုံးက လူများသည်လည်း ချောင်းထဲတွင်သာ ရေချိုးကြပါသည်။ မနက်စောစောတွင် သောက်ရေ၊ သုံးရေအဖြစ် ချောင်းထဲမှ ရေကို ခပ်ကြသလို၊ နေ့ခင်း၊ ညနေစောင်းတို့တွင် ချောင်းထဲတွင် အိုးခွက်ပန်းကန်ဆေး၊ အ၀တ်လျှော်၊ ရေချိုး စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ကြရသည်။ ကြည်လင်လှသော ချောင်းရေသည် ဒေသတစ်ခုလုံး၏ မှီခိုအားထားရာ အသက်သွေးကြောတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ချောင်းထဲတွင် သစ်ဖောင်များ၊ ၀ါးဖောင်များ မျှောချခြင်း၊ ဆည်များပိတ်၍ ငါးဖမ်းခြင်း၊ မြုံးထောင်ခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း၊ စက်လှေများ ပြေးဆွဲခြင်း၊ ချောင်းကမ်းဘေး မြေလွတ်များ၊ နွေအခါ ပေါ်လာတတ်သော ကျွန်းများပေါ်တွင် သီးပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကမ်းစပ်များတွင် သစ်သားပြားအင်ဝိုင်းလေးဖြင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ရွှေကျင်ခြင်း စသည်တို့သည်လည်း ချောင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ လုပ်ကိုင်နေကြသော အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ဖြစ်လေသည်။
ချောင်းထဲတွင် ငါး၊ လိပ်၊ စသော ရေသတ္တ၀ါများ ပေါများလှသည်သာမက ကလေးသာသာအရွယ် ငါးကြီးများ (ငါးထွေ ဟု သိရသည်) သည်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရေဆိပ်တွင် အများအပြားရှိပြီး ထိုနေရာမှလွဲကာ အခြားနေရာသို့လည်း သွားလေ့မရှိသဖြင့် ဘုန်းကြီးငါးဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကြီးမှ မနက်ဆယ်နာရီ သံချောင်းခေါက်လျှင် ထိုငါးကြီးများသည် ကမ်းစပ်သို့ ရောက်လာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသားများ၊ ရပ်သူရွာသားများ ကျွေးသော ထမင်းကို ကျယ်ပြန့်ကြီးမားသော ပါးစပ်ကြီးများ ဟကာ ဟကာနှင့် လာရောက် စားသောက်ကြလေသည်။ ကျွန်မတို့ကလေးတစ်သိုက်မှာ ငါးစာကျွေးချိန်တိုင်း ကျောင်းရေဆိပ်သို့သွားကာ ကြီးမားလှသော ငါးကြီးများကို အစာကျွေးရင်း တအံ့တသြ ငေးမောခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်မတို့ ရွာကလေးသို့ အခြားမြို့ရွာမှ ဧည့်သည်များ လာပါကလည်း ၄င်းဧည့်သည်များအား ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ငါးကြီးများကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြသခဲ့ကြပါသည်။ ထိုစဉ်ချိန်က ၄င်းငါးကြီးများသည်လည်း ဤချောင်းကလေး၏ နံမည်ကျော် ရတနာများ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းတွင်တော့ စိမ်းလန်းသော တောအုပ်များ တောင်တန်းများ ရှိပြီး ဟင်းရှာ၊ ထင်းရှာ၊ ၀ါးရှာ၊ မျှစ်ချိုးသူများသည် ဝေးဝေးလံလံ သွားစရာမလိုဘဲ ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းသို့ အလွယ်တကူ သွားရောက်ပြီး ရှာဖွေနိုင်သည်။ သဘာဝ အလေ့ကျပေါက်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ၀ါးပင်များ၊ ဘုရားအိုးထိုးရန် သပြေပန်းမှစ သော်ကပန်း၊ ဖက်ဆွတ်ပန်း၊ အင်ကြင်းပန်း စသည် တောပန်း၊တောင်ပန်းများလည်း အလွန်ပေါလှပါသည်။ ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်ကနေ မျှော်ကြည့်လိုက်လျှင်ပင် တောအုပ်စိမ်းစိမ်းလေးကို လှမ်းမြင်နေရပြီး တောင်တန်းများပေါ်မှ ရေသောက်ဆင်းလာသည့် မျောက်များ၊ ချေများ၊ သမင်၊ ဆတ်တို့ကိုပင် ရံဖန်ရံခါ တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးသည်။ ချောင်းကမ်းစပ် တောအုပ်ထဲမှ တောကောင်များ အော်သံ၊ ချေဆတ်သံ၊ သမင်တောက်သံများကိုပင် ကြားရလေ့ရှိပါသည်။ ချောင်းထဲရှိ ငါးများမှာလည်း နယ်သူနယ်သားများအတွက် ဖူလုံရုံသာမက၊ ဖမ်း၍မကုန်အောင်ပင် ပေါများလွန်းလှပါသည်။
ချောင်းထဲတွင် ဆော့ကစားရင်း ကလေးငယ်တိုင်း ၅နှစ် ၆နှစ်အရွယ်တွင် မသင်ရဘဲ ရေကူးတတ်လာကြသလို ကလေးတို့အတွက် အချိန်ဖြုန်းရာ အကောင်းဆုံးနေရာသည်လည်း ချောင်းအတွင်းဆော့ကစားခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ချောင်းထဲတွင် ကလေးလူကြီး ရေကူး၊ ရေငုတ်ပြိုင်ခြင်း၊ အပျော်လှေစီးခြင်း၊ ကျောက်တုံးများ ငုတ်တမ်းကစားခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း စသည်ဖြင့် ပျော်စရာ ကောင်းလှသလို၊ ကလေးများမှာမူ ချောင်းထဲရောက်လျှင် အိမ်မှ လူကြီးတစ်ယောက်ယောက် လိုက်မခေါ်မချင်း မပြန်တော့သည်မှာ ကလေးအားလုံး၏ သဘာဝလို ဖြစ်နေခဲ့သည်။ မိမိအိမ်ရှိ ကလေးတစ်ယောက်ယောက် အိမ်တွင် ပျောက်နေပါက ရေချောင်းတွင် လိုက်ရှာရမည်မှာလည်း လူကြီးတိုင်းက သိနားလည်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ ကလေးတိုင်းက ချောင်းကလေးတွင် ပျော်မွေ့ကြသည်။ ချောင်းကလေးကို ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြလေသည်။ ထိုစဉ်ချိန်က မြို့ရွာတိုင်းရှိ ချောင်းကမ်းစပ်သည် ရေချိုးသူများ၊ ချောင်းထဲတွင် ဆော့ကစားသူများ၊ အ၀တ်လျှော်၊ အိုးခွက်ဆေးသူများနှင့် အလွန်စည်ကားပြီး ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းလှသည်။ ရပ်ရွာထဲမှ လူကြီးလူငယ်များ အချင်းချင်း သတင်းစကား၊ အတင်းစကားများ ပြောစရာရှိလျှင်ပင် ရေချောင်းထဲတွင် ရေချိုးရင်း၊ အ၀တ်လျှော်ရင်း၊ အိုးခွက်ပန်းကန်ဆေးရင်း တွေ့ဆုံ ချိန်းချက်လုပ်ကာ ပြောကြလေ့ရှိသည်အထိပင် ချောင်းကလေးမှာ များစွာ အရေးပါခဲ့ဖူးပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ချောင်းထဲတွင် ရေချိုးရင်း ကောက်ရတတ်သော ကျောက်တုံးအချို့သည် အဖိုးများစွာ ထိုက်တန်သော ကျောက်စိမ်းများ ဖြစ်နေတတ်ခဲ့သည်။ ချောင်းကမ်းဘေးမှ မြေကြီးများကို ကျင်ယူလျှင်ပင် ရွှေမှုန်လေးများပါဝင်သောကြောင့် ဒေသခံလူအချို့ ရွှေကျင်ခြင်း၊ ကျောက်စိမ်းရှာဖွေရန် ရေငုတ်ကျင်းမျာဖြင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် တူးဖော်ခြင်း၊ စသည်တို့ဖြင့်လည်း ချောင်းကလေးကို မှီခိုကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်နိုင်ခဲ့လေသည်။ သို့ဖြင့် အဖိုးတန် ကျောက်စိမ်းရော၊ ရွှေပါ ထွက်သဖြင့် ချောင်းကလေး၏ အမည်နာမသည် ကျော်ကြား ထင်ရှား လာလေတော့သည်။ တဖြေးဖြေးနှင့် ချောင်းကလေး ရှိရာအရပ်ဆီသို့ ဒေသအသီးသီး၊ မြို့ရွာအနှံ့အပြားမှ လူများ ရောက်ရှိလာကြသကဲ့သို့ ချောင်းပတ်ဝန်းကျင် မြို့ရွာများသည်လည်း လူနေအိမ်ခြေများ ထူထပ်လာလေတော့သည်။
ယခုတော့ ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်ဖေးက ချောင်းကလေးသည် ရွှေများ၊ ကျောက်စိမ်းများ ထွက်သောကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ယခင်ကလို သာယာလှပသော ချောင်းကလေးတော့ မဟုတ်တော့ပါပြီ။ ယခင်တုန်းက မိုးရာသီမှလွဲ၍ ကျန်သည့်အချိန်များတွင် စိမ်းလဲ့ကြည်လင် ငြိမ့်ညောင်းနေခဲ့သော ရေအပြင်သည် ယခုအချိန်တွင် နောက်ကျိ ၀ါဝင်းနေသော ရွံနှစ်ရေများသာ စီးဆင်းနေခဲ့လေပြီ။ ယခင်က ကျောက်တုံးများကို ဖြတ်သန်းပြီး စီးဆင်းရသောကြောင့် ထွက်ပေါ်နေကျ ချောင်းရေစီးသံ ချိုလွင်လွင်ပင်လျှင် ယခုတော့ နှုံးမြေများ၊ နွံနှစ်များကိုသာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းရပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ငြင်သာငြိမ့်ညောင်းသော ချောင်းကလေး၏ တေးသံကိုပင် မကြားရတော့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ ဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့် ချောင်းရေများ ၁၂လရာသီလုံး နောက်ကျိနေရပါသနည်း၊ တေးသံများ မသီကြွေးနိုင်တော့ပါသနည်းဟု မေးလာသော် ဖြေစရာအဖြေက လူတို့၏ လောဘကြောင့် ဟူ၍သာ ဖြေစရာရှိပါသည်။
ချောင်းရေကို လွဲကာ အောက်ခြေကြမ်းပြင်တွင် ရတနာရှာဖွေပုံများ
ကျောက်စိမ်းနှင့် ရွှေများကြောင့် နံမည်ကျော်သော ကျွန်မ၏ မွေးရပ်မြေသည် ယခုခေတ်တွင် ငွေအင်အားများစွာတို့ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသော ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီများ၊ ရွှေတူးဖော်သော လုပ်ငန်းများ နေရာအနှံ့ လက်ညိုးထိုးမလွဲအောင် ရောက်ရှိလို့ လာလေပြီ။ စက်ကိရိယာ အစုံအလင်ဖြင့် တူးဖော်ရင်း ရလာသမျှ မြေကြီးများကို ချောင်းကမ်းစပ် လူနေအိမ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် တောင်လိုပုံနေသော မို့မောက်မြေပြင်များလည်း နေရာအနှံ့ပင်။ မြေကြီးများကို ရေအင်အားများများဖြင့် မျှောတိုက်ပြီး ရွှေရှာခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ကွက်အသီးသီး၊ မှော်နယ်မြေအနှံ့မှ ရွံ့မြေများ ပျော်ဝင်နေသောရေများ ချောင်းကလေးအတွင်းသို့ စီးဝင် လာရခြင်းကြောင့်လည်း ချောင်းကလေးမှာ ယခင်ကလို နက်ရှိုင်းခြင်းမရှိ၊ ကြည်လင်ခြင်းလည်းမရှိ၊ ရွံ့နွံများကြောင့် တဖြေးဖြေးနှင့် တိမ်ကောလာနေချေပြီ။ ယခုအခါမှာတော့ သာယာလှပသော စိမ်းလဲ့ကြည်လင်သော၊ သန့်စင်အေးမြသော ချောင်းကလေး မဖြစ်နိုင်တော့ပြီ။ တေးသံလွင်လွင် မချိုမြနိုင်တော့ပေ။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, March 15, 2011 Tuesday, March 15, 2011 Labels: ရသစာစုများ
သူက အမိအဖမရှိ တစ်ကောင်ကြွက်..
ဘ၀ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရုန်းကန်နေရသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သေးရဲ့။ ကျောင်းစရိတ် ကူညီထောက်ပံ့သူ မရှိတဲ့အတွက် ပညာတတ် ဖြစ်ချင်လွန်းသောစိတ်ဖြင့် မီးဖိုချောင်သုံး အသေးအမွှားပစ္စည်းတွေ၊ ငရုပ်၊ကြက်သွန် စတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် လေးတွေကို အိမ်ပေါက်စေ့ လိုက်လံ ရောင်းချပြီး ကျောင်းစရိတ်ရှာ ကျောင်းတက်ရတဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်းတဲ့ဘ၀ပါ။ ရသမျှငွေလေးကို ကျောင်းစရိတ်အတွက် ချွေတာ စုဆောင်း နေရတာနဲ့ အစားအသောက်ကို ခြိုးခြံချွေတာပြီး မစားရက်မသောက်ရက် ဖြစ်နေတတ်ခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာတော့… အဲဒီလို ဈေးလိုက်ရောင်းရင်း သူ့ဗိုက်ထဲက မခံမရပ်နိုင်အောင် ဆာလောင်နေခဲ့ပါတယ်။ ခြေလှမ်းတွေတောင် ဆက်ပြီးလှမ်းဖို့ သူ့မှာ အင်အား မရှိသလောက် ဖြစ်နေရပါပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း အကြွေစေ့ အနည်းငယ်သာ ကျန်ပါတော့တယ်.. ဒီငွေလေးဟာလည်း အစားအသောက်ဝယ်စားဖို့ လုံလောက်တဲ့ ငွေ ပမာဏ မဟုတ်တော့ပါဘူး…. ဒါကြောင့် သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာက နောက်တစ်အိမ်မှာတော့ အစားအစာ တစ်ခုခု ရလိုရငြား အကူအညီ တောင်းကြည့်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူခေါက်လိုက်မိတဲ့ အိမ်တံခါးကို လာဖွင့်သူက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ချစ်စရာ မိန်းမပျိုလေး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတော့ အစားအသောက် တစ်ခုခု တောင်းဖို့ ရှက်ရွံ့စိတ်နဲ့ သူ တွန့်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်… ဒီတော့ အစားတစ်ခုခု တောင်းရမဲ့အစား ရေတစ်ခွက်လောက် သောက်ပါရစေလို့သာ သူ့နှုတ်က ထွက်သွားခဲ့မိတော့တယ်။ သို့ပေမဲ့ ပါးနပ်တဲ့ မိန်းမပျိုလေးက သူ့ကြည့်ရတာ သိပ်ဆာနေပုံရတယ်လို့ တွေးလိုက်မိပြီး နွားနို့ဖန်ခွက်ကြီးကြီး တစ်ခွက် အပြည့်ကို ယူလာပြီး ကောင်လေးကို ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကောင်လေးက နွားနို့ခွက်ကို ဖြေးညင်းစွာ သောက်ရင်းက သူမလေးကို မေးလိုက်ပါတယ်….
“ဒီနွားနို့အတွက် ငွေဘယ်လောက်ကျပါသလဲ ခင်ဗျာ” လို့…
သူ့အမေးကို မိန်းကလေးက ပြန်ဖြေပါတယ်…
“နွားနို့က ကျွန်မ စေတနာနဲ့ တိုက်တာပါ။ အဲဒီအတွက် ရှင်တစ်ပြားမှ ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မအမေက ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ စေတနာ မေတ္တာ အတွက် တန်ဖိုးအဖြစ် တစ်ဖက်လူဆီက ဘာကိုမှ ပြန်လက်မခံဖို့ ကျွန်မကို သင်ပေးထားပါတယ် ”
“အိုး… ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် ဒီနွားနို့တစ်ခွက်အတွက် ကျွန်တော့် အသည်းနှလုံးထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် သိပ်ကိုဆာနေခဲ့တာပါ ” လို့ သူ ကျေးဇူးတင်လွန်းစွာ ပြန်ပြောလိုက်မိပါတယ်။
နွားနို့တစ်ခွက်ကုန်အောင် သောက်လို့ပြီးတာနဲ့ အားအင်ပြည့်ဝစွာနဲ့ အဲဒီအိမ်ကနေ ပြန်ထွက်လာပါတယ်… ဒီနွားနို့တစ်ခွက်ကြောင့် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ခွန်အားပြည့်လာရုံတင်မက စိတ်ဓာတ်အင်အားပါ မြှင့်တက်လာတယ်လို့ သူယုံကြည်လာတယ်.. လောကကြီးမှာ သူ့ကို နွားနို့တစ်ခွက် တိုက်လိုက်တဲ့ မိန်းခလေးလို အကြင်နာတရား ပြည့်ဝသူများလည်း ရှိပါသေးလား ဆိုတာ သူသဘောပေါက်လာတယ်… သူဟာ ဆင်းရဲစွာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ သူ့ဘ၀ကြီးကို တခါတခါ စိတ်ကုန်မိပြီး လောကကြီးကို အရှုံးပေးဖို့ အထိပါ သူစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ နွားနို့တစ်ခွက်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မယုံနိုင်စရာ အင်အားတွေ သူ ရရှိခဲ့ပါပြီ။
နှစ်အတန်ကြာတဲ့အခါ သူ့ကို နွားနို့တိုက်ခဲ့တဲ့ မိန်းခလေးဟာ အပြင်းအထန် နေမကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့က ဆရာဝန်တွေဟာ မိန်းခလေးရဲ့ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပြီး မိန်းခလေးရဲ့ အခြေအနေဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုဆိုးဆိုးလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မြို့တော်က ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံမှာ အခု မိန်းခလေးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေကို ကုသရာမှာ အလွန်ထူးချွန်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် ရှိကြောင်းနဲ့ ထိုဆရာဝန်ကို သွားတွေ့ပြီး ကုသမှု ခံယူသ့င်ကြောင်း သူမကို ကုနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေက တိုက်တွန်းတာနဲ့ မိန်းခလေးရဲ့ မိဘတွေက သူမကို ဆေးကုသခံဖို့ မြို့တော်ကြီးကို ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်… ဆေးရုံကြီးဆီရောက်လို့ သူမ မိဘတွေက ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီး လူနာအကြောင်း ပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့ လူနာကောင်မလေးရဲ့ မြို့နံမည်လဲ ကြားလိုက်ရော ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ လင်းလက်မှုတစ်ချို့ ပေါ်လာပါတယ်။ ချက်ခြင်းပဲ ဆရာဝန်ကြီးက ထိုင်နေရာကနေ အလျှင်အမြန် ထလိုက်ပြီး ဆေးရုံက သူ့ကိုယ်ပိုင် အခန်းထဲကို ကသောကမျော ၀င်ရောက်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူရဲ့ ဂျူတီကုတ်ကို အမြန် ကောက်ဝတ် လိုက်ပြီး လူနာမိန်းကလေးကို သွားကြည့်ပါတယ်။ ဒီမှာတင်ဘဲ ဆရာဝန်ကြီး မှတ်မိလိုက်ပါပြီ…..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, March 13, 2011 Sunday, March 13, 2011 Labels: သတင်း
တစ်ကမ္ဘာလုံး စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေ ဒီရက်ပိုင်း ဆက်တိုက် ဖြစ်လာနေပါတယ်.. ကမ္ဘာပျက်တဲ့ ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ကားတို့လို၊ The day after tomorrow တို့လို ရေလွှမ်းမိုးတာတွေ၊ အအေးလှိုင်းကြောင့် မြို့ရွာတွေ ပျက်စီးတာတွေကို ရုပ်ရှင်ဆက်တင်နဲ့ တည်ဆောက်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပေမဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ထိတ်လန့်ဖွယ် ကြည့်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဆက်တင်ဆောက်ပြီး ရိုက်ထားတာမဟုတ်တဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကို တီဗီသတင်းတွေကနေ မျက်ဝါးထင်ထင် ထိတ်လန့်ဖွယ် မြင်လိုက်ကြရပါတယ်.. ဂျပန်မှာ အလွန်အင်အားကြီးတဲ့ ငလျှင်ကြောင့် ဆူနာမီ ရေလှိုင်းကြီးတွေ တစ်လိမ့်လိမ့်တက်လာပြီး ကျယ်လောာင်တဲ့ အသံကြီးတွေနဲ့ မြို့ရွာကြီးတွေကို ဖုံးလွှမ်းပစ်တာ၊ အိမ်တွေ အလုံးလိုက် အလုံးလိုက် မျှောပါနေတာတွေ၊ ကားတွေ၊ လေယာဉ်တွေ အစီးလိုက် ရေလှိုင်းတွေမှာ မျှောပါသွားတာတွေဟာ မယုံနိုင်ဖွယ် ကောင်းလွန်းလှပါတယ်.. ရုပ်ရှင်တွေကနေ ဆက်တင် ဆောက်ပြီး ရိုက်ပြတာထက် ပိုမိုဆိုးဝါး ထိတ်လန့်ဖွယ် ကောင်းလွန်းလှပါတယ်.. တကယ်တော့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတာထက် ပိုမိုဆိုးဝါးလို့ နေပါတယ်။
ဂျပန်ငလျှင်နဲ့ တရုတ်နယ်စပ် ရန်ကျန်းခရိုင် ငလျှင်သတင်း ဓာတ်ပုံများကို မကြည့်မမြင်ရသေးသူများ၊ သတင်းတွေ ဖတ်ရှုဖို့ ခက်ခဲသော ပြည်တွင်းက လူများအတွက် ဓာတ်ပုံများကို ရနိုင်သလောက် စုဆောင်းပြီး အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရေလွှမ်းမိုးခံရပြီး ဆက်လက်မီးတောက်လောင်နေဆဲ အိမ်များ
တံမြက်စည်းလှဲသလို ရေလှိုင်းများက တိုက်စားပစ်တဲ့ အိုးအိမ်အဆောက်အဦးများ
ပင်လယ်ကမ်းခြေက ၀င်ရောက်လာတဲ့ လှိုင်းလုံးများ
အိပ်မက် မဟုတ်သလို ရုပ်ရှင်လည်းမဟုတ်ပါ...
ပြင်းအား ၈.၉ မဂ္ဂနီကျူတောင်ရှိပြီး အလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ် ကောင်းအောင် အင်အားကြီးမားတဲ့ ငလျှင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါတောင် ဂျပန်နိုင်ငံလို နည်းပညာ တိုးတက်လွန်းပြီး အဆောက်အဦးတွေကို ငလျှင်ဒဏ်ခံနိုင်အောင် တွက်ချက်ပြီး ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံမို့ ဒီလောက်ပြင်းအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ နည်းပညာ အားနည်း၊ ငွေကြေးလည်း မချမ်းသာ၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလည်း နှေးကွေးလွန်းတဲ့ နိုင်ငံမျိုးသာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုပြင်းအား၊ ဒီလို ရေလွှမ်းမိုးမှုမျိုးနဲ့ဆို လူဦးရေ အသေပျောက်ဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ များပြားမှာတော့ အသေအချာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်ပေးနေတာ၊ သတင်းတွေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ထုတ်ပြန်နိုင်တာ၊ အသေအပျောက်နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ဆောင်ရွက်နေတာ၊ ဒုက္ခသည်တွေကို ရဲရဲရင့်ရင့် သက်စွန့်ဆံဖျား ကယ်တင်နေတာတွေ ကြည့်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေကို လေးစားဖို့ကောင်းလှပါတယ်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, March 11, 2011 Friday, March 11, 2011 Labels: ရသစာစုများ
စကားလုံးတွေနဲ့ သိုင်းဝိုင်းတန်ဆာ ဆင်မထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေများကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်… အောက်က ပုံလေးတွေနဲ့သာ စာတစ်လုံး စကားတစ်ခွန်းမှမပါဘဲ ခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်…